Dubai Family Fun-Atlantis na Lapita comboeze 212022-05-23T17:14:55+05:30
Interhotel na-ebufe site na ogige Lapita Dubai na ebe ntụrụndụ gaa Atlantis The Palm na ndabere nkeonwe.
Ọdụ ụgbọ elu ọpụpụ na-ebufe site na Atlantis The Palm gaa ọdụ ụgbọ elu International Dubai na ndabere nkeonwe.
Lelee Lapita Dubai Parks & Resort wee bufee na Atlantis, The Palm. Onye ọkwọ ụgbọ ala anyị ga-erute na họtel n'oge maka ịnyefe interhotel. Otu n'ime ebe Dubai kacha eleta, ọ bụghị ihe ijuanya na ebe kpakpando ise nke Palm Island na-egosi na ọtụtụ akwụkwọ ozi, foto onwe ezumike na posts Instagram. Ị nwere ike ịtụ anya ntụrụndụ na-adịghị agwụ agwụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ụwa, ahụmahụ aquarium pụrụ iche na ihe osise pụtara ìhè na ụlọ oriri na ọṅụṅụ okomoko a ma ama n'ụwa.
Ụdị ime ụlọ: Deluxe King Room Resort View / Queen Room / Imperial Club King Room price
Ịkekọrịta Otu $ 1,435
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 805
Aha ụlọ nkwari akụ: Lapita Dubai Parks & Resort